China Escalator indibano yesixhobo umfanekiso we-5 umzi mveliso nabaxhasi | Hongli
Umsebenzi wokulawulwa kombane
Zimbini iindlela. Imodeli yokuqala yimodeli eqhelekileyo, kwaye indlela yesibini yindlela yokugcina. Yindlela eqhelekileyo xa zonke iiplagi ezingalungisi kwigumbi elingaphezulu nangaphantsi komatshini zifakiwe. I-escalator iqalile ukuthenga abasebenzi ngesitshixo xa kungekho mntu kuyo. Abasebenzi bacinezela iqhosha lokumisa ukuze bame kwi-escalator. Xa umqondiso oyintloko ufunyenwe, uqalile kwaye uqhutywa ngesantya esinexabiso. Khupha enye yeeplagi ezingalungisi kwaye ufake ibhokisi yokulungisa kwimodi yokulungisa. Umsebenzisi unokusebenzisa ibhokisi yokulungisa ukuvula ileli. Inokuba yibhokisi enye yenkonzo kwigumbi elingaphezulu nangaphantsi komatshini. Ukuba iibhokisi zenkonzo ezimbini zifakelwe ngaxeshanye, isinyusi asikwazi ukuqalwa.
I-Pedal inokusebenzisa i-aluminium yonke i-alloy die cast okanye i-cascade yentsimbi engenasici. Kuba inesisindo sokukhanya, ukuchaneka okuphezulu kunye nembonakalo entle. Kwaye i-roller ehambileyo yenziwa ngamandla aphezulu angeniswa kwi-polyurethane.
Isixhobo sokuhambisa inyathelo sithatha ipeyinti yokuthintela umhlwa. Icandelo elithambekeleyo lixhaswe yitafile yesikhokelo sikaloliwe esisekelayo. Isitya esiphakathi senkxaso yenkxaso kaloliwe senziwe ngesixhobo se-CNC. Isiporo sesikhokelo esiphakathi senziwe ngeprofayile, i-galvanised anti-rust.
Isixhobo sedrive kunye nesixinzelelo somatshini zizo zonke zi-sprocket. I-sprocket ye-drive ifuna ukuba amazinyo egiya adityaniswe. Umngxunya wokuxinanisa ukuqhuba kufuneka uhambelane. Kwaye ibhodi ye-apron ikwadlala indima yokuthintela ukuphambuka. Ikwasebenza njengetreyini yokulwa, ethintela amanyathelo ukuba angawi kwaye ehle ezantsi.
Isasazisi entloko esezantsi